जाडो मौसममा कोरोना संक्रमणबाट कसरी बच्ने ? – Janapriyakhabar
जाडो मौसममा कोरोना संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?
कोरोना भाइरसले आम नेपालीको जनजीवन यतिबेला प्रभावित बनाएको छ । चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ । चिसो मौसममा बढी सक्रिय हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको कोरोना भाइरसको कारण स्वतन्त्र भएर कतै पनि हिँड्न नसकेको अवस्था छ ।
अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रका अधिकारीहरु कोभिडको महामारी नसकिएको भन्दै सम्पर्क सीमित गराउनु नै यसबाट बच्ने विकल्प रहेको बताउँछन् । कोरोना संक्रमित भइसकेका व्यक्तिलाई अरुबाट सकेसम्म अलग राख्नुपर्छ । यदि सम्भव छ भने कोरोना संक्रमितको लागि छुट्टै सुत्ने कोठा र शौचालयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
आजै मात्र ७ हजार २११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप २७ जनाको मृत्यु